တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် KIO ကို ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ထပ်မံ ကမ်းလှမ်းမည် | ဧရာဝတီ
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် KIO ကို ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ထပ်မံ ကမ်းလှမ်းမည်
သန်းထိုက်ဦး| January 17, 2013 | Hits:2,298
| | ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ကျင်းချန်း ဟိုတယ်တွင် ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) နှင့် အစိုးရအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ၊ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက မကြာခင် ရက်ပိုင်းတွင် ထပ်မံ ကမ်းလှမ်းမည်ဟု သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က အစိုးရအနေနှင့် KIO အဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်များထံ ကမ်းလှမ်းထားရာ အကြောင်း ပြန်ကြားခြင်း မရှိပါက ထပ်မံ ကမ်းလှမ်းရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ယမန်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ (Myanmar Peace Center – MPC) တွင် ပြောကြားကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးလှမောင်ရွှေက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အကြောင်းကြောင်းကြောင့် တဖက် အဖွဲ့အစည်းက အကြောင်း မပြန်နိုင်သေးရင် သူအနေနဲ့ နောက်အပတ်တွေမှာ ထပ်ပြီးတော့ ကမ်းလှမ်းစာကို ပို့မယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ သို့သော် မည်သည့်နေရက်တွင် ပေးပို့မည်ကို ပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။
အစိုးရအနေနှင့် နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ သွားရောက်နိုင်မည့် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ သို့မဟုတ် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် တွေ့ဆုံရန် အဆိုပြုထားပြီး KIO ခေါင်းဆောင်များထံ ကမ်းလှမ်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရက ပေးပို့ခဲ့သည့်စာကိုလည်း KIO ခေါင်းဆောင်များ လက်ခံရရှိပြီး ယနေ့အထိ တစုံတရာ အကြာင်းပြန်ကြားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
KIO တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးလနန်က “ဦးအောင်မင်းက အလုပ်များအောင် ပေးထားတယ်ဆိုတော့ အလုပ်များနေတယ်။ ထိုးစစ်တွေကိုပဲ ခုခံတိုက်ခိုက်နေရတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဦးအောင်မင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းတဲ့ စာအပေါ်မှာ အကြောင်းပြန်ကြားဖို့ အချိန်တော့ မပေးနိုင်သေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အလုပ်များလိမ့်မည်ဟု ပြောကြား၍ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလအတွင်း တွေ့ဆုံရန် ပြောကြားထားသော်လည်း နှစ်ဖက်တပ်များအကြား တင်းမာနေသည့် စစ်ရေး အခြေအနေများကို ဖြေရှင်းနေကြောင်း ဦးလနန်က ဆိုသည်။
“အစိုးရရဲ့ ထိုးစစ်ဆင်းမှု အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်၊ အခု အစိုးရတပ်တွေ အလုံးအရင်းနဲ့ တက်လာနေတုန်းပဲ။ မြစ်ကြီးနား ဘက်ကနေ ရထားလမ်းကြောင်းနဲ့။ ဒါကိုကြည့်ချင်အားဖြင့် သူတို့က ဒီပွင့်လင်းရာသီမှာ သူတို့ လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံ ပေါ်နေ တယ်” ဟု ဦးလနန်က ပြောသည်။
အစိုးရအနေနှင့် တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး လိုအပ်တောင်းဆိုနေသည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပေါ်ရန် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှသာလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိနိုင်မည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒု ဝန်ကြီး၊ သမ္မတ၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးရဲထွဋ်က “ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ စစ်ရေးတွေကို ပြန်လျှော့ချပြီးတော့မှ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ပြန်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့၊ အထူးသဖြင့် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ပြောနိုင်မယ့်လူတွေကို သူတို့ဘက်က ပါစေချင်တာပေါ့၊ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့တုန်းက ကျနော်တို့ဘက်က ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးတို့ လိုက်ပါသွားတဲ့အချိန်မှာ ဟိုဖက်က ဦးဂွန်မော်တို့က ငြင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဒါတွေ မဆွေးနွေးနိုင်တော့ဘူး” ဟု ဧရာဝတီသတင်းဌာနနှင့် သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ဘယ်လောက် မျှော်လင့်လဲဆိုရင် ကျနော်ကတော့ ပြန်ကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း မျှော်လင့်ပြီးတော့ ဆက်ပြီးတော့ ကြိုးစားသွားမှာပါ၊ တဖက်ရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ကတော့ ဒါ KIO အဖွဲ့အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်” ဟု ဦးရဲထွဋ်က ဆက်ပြောသည်။
၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် KIO ခေါင်းဆောင်များ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ တွင် နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ပြန်လာရေး အစိုးတပ်များ ဆုတ်ပေးရန် ဆွေးနွေး
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လုပ်သွားမည်ဟု ကချင် ကွန်မန်ဒိုဟောင်း ပြော
တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်ဒေသခံများ ထပ်မံ တိမ်းရှောင်ရ
အစိုးရတပ်က KIA ကို လမ်းကြောင်းရှင်းရန် သတိပေး
8 Responses	LeaveaReply Cancel reply
မျိုးချစ် January 17, 2013 - 5:55 pm	တကယ်ပါပဲဦးအောင်မင်းပေးတဲ့အလုပ်ကတောတောရက်စက်တယ်ကွာ
Reply	ရွှေသားမက် January 17, 2013 - 6:27 pm	မင်းတို့လုပ်ချင်ရာလုပ်ထားပေါ့ကွာ…
ငါတို့ဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ သိရဲ့လား…….သတိထားပါ..ဒါပဲ
Reply	Khin Khin Soe January 17, 2013 - 8:50 pm	ဧရာဝတီို့ကြိုက်ပါသည်။အဓွန့်ရှည်ပါစေ
Reply	Golden Owl January 18, 2013 - 12:41 am	Aung Min must have the courage to offer ti have political dialogue. Peace Talk? What? Why can’t the government offer political dialogue? Coward government? UNFC must push political dialogue to justify the Kachins. Peace Talk after Peace Talk with no real result is just wasting time and resources. What is the secret agenda behind peace talk?
Reply	Shwe Linyone January 18, 2013 - 8:55 am	Please have political dialogue. Do not try to heal the wound with the wrong medication. Knowingly injecting the wrong medicine can even kill the patient, and send the doctor who malpractices to prison. The right medication to heal the wound of the Union of Burma is POLITICAL DIALOGUE, not peace talk.
Reply	Chinlay January 18, 2013 - 2:18 pm	After talking with U Aung Min , the monks were attacked by the police with fire bomb .
The Kachin people also are attacked by bama army and airforce with 105mm and camical bomb.
U Aung Min is notapeace maker. He is peace breaker. Don’t trust him.Dangerous.
Reply	rocker January 19, 2013 - 12:18 am	အောင်မင်းကလက်ကမ်းလိုက်မင်းအောင်လှိုင်ကကန်ထုတ်လိုက်နဲုKIOကတော့ရှူးမယ်….
Reply	ah dau January 20, 2013 - 7:34 pm	ဦးဏှောက် မရှိတဲ့လူတွေ အစိုး ရ လုပ်လို့တိုင်း ပြည် နာတယ်၊ဦးဏှောက် တိမ်တိမ်း၊ အတွေး မိန်း တဲ့တစ်မှတ် ညှဏ်ဖျုတ်ဦးဏှောက် လောက်နဲ့အစိုး ရ လုပ် နေ ကြ တာ၊ ဘာ မဟုတ် တဲ့KIA တွေ ကို တောင် ပြည် ပ ရန် လို Fighter Plane Jet တွေ နဲ့တိုက်ရှက်စရာ၊ဒါ တောင် အကျ ရှုံး အဲ ဒီလေက် များ တာ တကယ် အခြားပြည် ပ နိုင်ငံ ခြား တွေ နဲ့များ စစ် ဖြစ် လို့ကတော့ မတွေး ၀င့် စရာ ပဲ၊ မြန်မာသမိုင်း မှာ လဲ ဘယ် နိုင် ငံတွေ ကို စစ် နိုင် ဖူး တယ် မှ မရှိ ခဲ့ တာ။ အင်အား နည်း တဲ့ယိုးဒယား(Thailand) ကို တော့ နိုင် တာ ကြားဖူး တယ် ဒီချိန်တော့ ယောင်ပြီး သွား မဆွနဲ့တော့နော တိုင်း ပြည် ပြာ ဖြစ် သွား လိမ့် မယ်
ကချင် ကျောင်းသူတဦး သေဆုံးမှု ၂ နှစ်ကျော်အထိ အမှုမှန် မဖော်ထုတ်နိုင်သေး
ကချင် နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်
ဦးဘရန်ရှောင်ကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စရန် ကချင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များကို စည်းရုံး
မြစ်ကြီးနားတွင် လူ ၁၅၀ ခန့် အစာအဆိပ်သင့်
KIA ဝင်ဖမ်းမှာ ကွတ်ခိုင်ဒေသခံများ စိုးရိမ်နေ